★မြန်မာ့အလင်း★: Buddhism fastest-growing religion in Singapore
မွတ်ဆလင်ဘာသာကြီးကတော့ ကွဲအက်စပြုနေပါပြီ။ မွတ်ဆလင်ကထွက်ရင် သေဒဏ်ပေးမယ်လို့ တားမြစ်နေရတဲ့အထိပါပဲ။ မွတ်ဆလင်ဘာသာကို ဝေဖန်တဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေကို မွတ်ဆလင်အစိုးရတွေက ကြည့်ခွင့်မပေးတော့ပါဘူး။ ခြေမကိုင်မိ၊ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာ။ ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ လုံးဝပြတ်သားတယ်။ ယုံကြည်ရင်လက်ခံ . . . မယုံကြည်ရင် လက်မခံနဲ့။ ဒီနေ့မကြိုက်ဘူးနော်.. မနက်ဖြန် တခြားဘာသာ ပြောင်းမယ်ဆိုရင်လဲ ရပါတယ်။ ဘာအတားအဆီးမှ မလုပ်ပါဘူး။ မလေးရှားလို့ တရားရုံးတက်ပြီး အရေးဆိုဖို့လဲ မလိုပါဘူး။
လူတစ်ဦးချင်းရဲ့ ဆုံးဖြတ်ခွင့်ကို အလေးထားတဲ့အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာ အင်မတန်ကို တိုးတက်နေပါတယ်။ အနောက်ဖက်မှာသာမကပဲ စင်ကာပူမှာလဲ ဖွံ့ဖြိုးမှုအမြန်ဆုံးဘာသာ ဖြစ်နေပါပြီ။
DPA, May 19, 2008
Singapore -- Buddhism is the fastest-growing religion in Singapore, particularly among the young and educated,acensus conducted by The Straits Times showed Monday.
The number of people aged 15 and over who are Buddhists had jumped from 31 percent of the population in 1990 to 43 percent, or 1.1 million people, 10 years later, making Buddhism the largest religion in the city-state.
The census figures published in the newspaper showedafourfold jump in Buddhists who were graduates between 1990 and 2000.Membership numbers of Buddhist youth groups have soared.
Converts told the newspaper that the religion offered comfort in the face of uncertainties and disasters. Moreover, they said, it wasaconstant reminder to look beyond materialism to attain calmness and happiness through meditation and reflection. 'Through Buddhism, I can beabetter daughter,abetter sister,abetter friend andabetter colleague,' Hindu-born Tara Melwani, the 43-year-old director ofaretailing group, was quoted as saying.
Actress Nadya Hutagalung, 34, born intoaChristian family, said she was attracted by the philosophy of Buddhism, according to the newspaper.
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 6:54 AM